वि.सं. २०३४ मा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका उमेशप्रसाद मैनाली नेपाल सरकारको पूर्वसचिव हुनुहुन्छ । अनुभवी र कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित मैनालीले लोकसेवा आयोगकै परीक्षाबाट राजपत्रअनङ्कित सेवामा प्रवेश गरी सोही प्रक्रियाबाट अधिकृत, सहायक सचिव, सहसचिव भई नेपाल सरकारका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा कार्य गर्नुभएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशासक, अध्यागमन विभागको महानिर्देशक, विशेष प्रहरी विभागको सहसचिव, गृह मन्त्रालयको विभिन्न महाशाखा प्रमुख हुँदै उहाँ २०६१ सालमा सचिवमा बढुवा हुनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिव पदमा रहेर कार्य गर्नुभएको छ । सचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि नागरिक समाजमा क्रियाशील रहेकै समयमा उहाँ लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएर आयोगलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै आउनुभएको छ । समसामयिक विषयमा गोरखापत्रका सहसम्पादक नारद गौतमले अध्यक्ष मैनालीसँग गर्नुभएको कुराकानी :
 नयाँ संविधानबाट आयोगलाई के–कस्ता जिम्मेवारी थपिएका छन् ?
यो जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगलाई कुनै कानुनी अड्चन त छैन नि ?
 आयोगले ऐन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको एक वर्ष बित्यो होइन ?
 थपिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगको तयारी कस्तो छ ?
 सङ्घीय सरकारी सेवा गठनका लागि कानुन निर्माणकार्य किन सुरु भएन ?
 सहमतिबेगर नै आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्ने कार्य भएका छन्, यसले आयोगलाई असर पर्दैन र ?
कतिपय सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले आयोगका निर्देशन पालना नगरेको अवस्था कत्तिको छ ?
 संविधानको अक्षर र भावनाको अनादर गर्ने ती संस्थाका अधिकारीलाई आयोगले के गर्न सक्छ ?
 दरबन्दी लुकाउने, आयोगबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई नियुक्ति नदिई झुलाउने प्रवृत्ति कत्तिको छ ?
 कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पु¥याउने भन्ने सिफारिस आयोगलगायत सबैतिरबाट भएको छ, कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के होला ?
 जनशक्ति विकास र निजामती सेवाप्रति आकर्षण बढाउन आयोगले के पहल गरेको छ ?
 सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी युनियन र राजनीतिक तवरबाट आयोगले कत्तिको दबाब झेल्नुपरेको छ ?
 अन्त्यमा अध्यक्षज्यूलाई भन्नुपर्ने केही छ कि ?